Iyada oo ku saleysan tusaalooyin, waxaan arki doonaa 6da cunsur ee lagama maarmaanka u ah in lagu daro qeexitaankaaga. Marka xigta, waxaan dabooli doonnaa wax kasta oo aad ku dari karto si aad uga dhigto mid hufan oo waafaqsan baahidaada. Tilmaamaha tayada, kuma koobnaan doontid naftaada kaliya adeeg bixiyaasha ugu fiican ee ku taageeraya, laakiin waxaas oo dhan ka sarreysa, isu dhig maareeye mashruuc, maamule, go'aan-qaade ama hoggaamiye wax-ku-ool ah.
Qor qeexitaan wax ku ool ah! Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Qoryaha Anatomy
horeLacag uga hel khadka tooska ah ee 0 €: Daabacaadda Diritaanka
socdaKu Daabac Baahida: 10 su'aalood oo aad marka hore isweydiiso!